Ciidamada Al Shabaab Oo Gudaha Ugalay Degmada Afgooye.
Saturday February 10, 2018 - 18:45:51 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dagaallo culus ay maanta gelin dambe ka qarxeen degmada Afgooye oo dhacda duleedka magaalada Muqdisho.
Dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamo katirsan Xarakada Al Shabaab ay weerar dhowr Jiho ah ku qaadeen saldhigyo maleeshiyaadka Dowladda Federaalka uga sugnaayeen gudaha Afgooye, goob joogayaal ayaa sheegay in ay arkeen xoogag aad u hubeysan oo gudaha usoo galay magaalada.
Ciidamada Al Shabaab ayaa la wareegay dhowr xaafadood oo katirsan degmada Afgooye balse caawa fiidkii ayay dib uga gurteen degmada kadib markii ay ku roondeeyeen dhowr xaafadood.
Maleeshiyaad Katirsan DF-ka ayaa la xaqiijiyay in ay ufirxadeen dhanka wadada laamiga ah ee u baxda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkii aadka u xooganaa ee galabta ka dhacay Afgooye.
Dagaalka ayaa bilaawday saacaddu markii ay ku beegneed 6:45 daqiiqo, boqolaal katirsan ciidamada Al Shabaab oo wata gaadiidka Tiknikada loo yaqaan ayaa dhowr jiho kasoo galay magaalada kadibna waxay isku faafiyeen dhowr xaafadood.
Dhinaca kale taliyaha booliska degmada Afgooye ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in weerar xooggan lagusoo qaaday xarumahooda degmada Afgooye balse ay iska difaaceen sida uu hadalka u dhigay, illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin Xarakada Al Shabaab oo ku aaddan dagaallada ka dhacay duleedka Muqdisho.